Wararka waxaa ka mid ah Koonfurta Sudan oo xukuumada Khartuum ka dalbatey in ciidamadeeda kala baxdo deegaanka Abyey, midowga Yurub oo shaaciyey inay aqoonsan yihiin golaha shacabka Liibiya, & warar kale.
Koonfurta Sudan oo ka dalbatay xukuumadda Khartoum in ay ciidamadeeda kala baxdo deegaanka Abyeey
Juba: – Xukuumadda koonfurta Sudan ayaa ka dalbatay xukuumadda Khartoum in ay ciidamadeeda kala baxdo deegaanka Abyeey ee ku taala xadka lagu muran san yahay ee u dhexeeya woqooyiga iyo koonfurta Sudan.
Hadalka mas’uuliyiinta koonfurta Sudan ayaa ku soo beegmaya xilli ciidanka Sudan ay shaaca ka qaadeen in ay gabi ahaan gacanta ku dhigeen deegaanka Abyeey, islamarkaana ay hadda wadaan ka safaynta kooxaha koonfureed ee hubaysan.
Dhanka kale dowladaha mareykanka iyo France ayaa cambaareeyey qabsashada ciidanka Sudan deegaanka Abyeey , waxayna codsadeen in si deg deg ah looga saaro ciidamada woqooyi ee dalka Sudan.
Wasiiro dowlaha madaxtooyada Sudan ninka lagu magcaabo Amiin Xasan Cumar ayaa sheegay in ciidanka Sudan ay sii joogi doonaan deegaanka Abyeey si ay u socodsiiyaan howlaha maamulka islamarkaana ay xukuumaddu diyaar u tahay in ay gasho wadahadal aan shuruud ku xirnayn.
Inkastoo uu 2 dal noqday dalka Sudan oo si rasmi ah ay taasi udhaqan gali doonto bisha July,hadana waxaa uu dalkasi umuuqada mid wajahaya markale dagaal sokeeye
Dagaalkani waa mid udhaxeya reer Waqooyiga wadanka waqtiga dheer katalinayay iyo reer koonfureedka dhawaan u codeeyay in ay ka go’een Sudan inteeda kale oo ay dowlad noqdaan.
Dagaalkani waa mid salka kuhaya lahaanshaha gobalka ugu qanisan xaga shidaalka wadaankaasi ee la yiraahdo Abyei .
Qaramada midobay ayaa muujisay cabsida laga qabo in uu dalka sudan marekale faraha lagalo dagaal sokeeye oo dhiig badani kudaato hadii aan si qoto dheer loo eegin xaalada goblka Abyee
Midowga Yurub oo shaaca ka qaaday taageeradiisa golaha shacabka Libya xilli qaraxyo ay gigileen magaalada Sentaan
Brussels:- U qeybsanaha arrimaha dibadda midowga Yurub haweenayda lagu magcaabo Kathryn Ashton ayaa shaaca ka qaaday taageerada ay u hayso golaha KMG dalka Libya kaasi oo hadda xarun kadhigtay deegaanka Benghazi ee bariga dalka Libya.
Ashton ayaa tilmaamtay in ay u joogto si ay ugu sharaxdo mas’uuliyiinta golaha shacabka Libya taageerada midowga yurub uu lagarab taagan yahay Libyiinta siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo sidii loo gaarsiin lahaa howlaha gargaarka bani’aadimnimo deegaanka Masaraata .
Dhanka kale madaxa golaha KMG Libya ninka lagu magcaabo Mustafe c/jaliil ayaa uga mahacad celiyey midowga Yurub taageerada ay la garab taagan yihiin shacabka libya dadaalka uu ugu jiro sidii uu u dhisan lahaa dowlada dimuqaraadi ah , waa suu hadalka u yiriyee.
Golaha iskaashiga oo joojiyey waan waantii uu kadhex waday xukuumadda iyo mucaaradka dalka Yemen
Sanca:- Xoghayaha guud ee golaha iskaashiga gacanka ninka lagu magacaabo C/ladhiif Zayyaani ayaa ka ambabaxay magaalada Sanca ee xarunta dalka Yemen isagoo ku sii jeeda magaalada Riyadh ee dalka boqortooyada sucuudi carabiya iyadoo wax heshiis ah aan laga gaarin khilaafka u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka dalkaas Yemen Maalintii shaley ayey ahayd markii loo balansanaa in madaxweyne cali C/della Saalax in uu saxiixo heshiiska lagu soo afjarayo rabshadaha ka socda dalka Yemen , kaasi oo mar sii horeysay ay saxiixeen mucaaradka balse madaxweyne Saalax ayaa shuruudo hor leh ku xiray saxiixa heshiiskan.
Television –ka qaranka Yemen ayaa waxaa ka soo muuqdy madaxweyne Saalax oo garb taagan madaxa wafdiga Khaliijka ahna xoghayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka C/ladhiif Zayyaani xilli xubnaha katirsan xisbiga haya talada dalka Yemen ay filanayaan saxiixa heshiiska maalin kadib markii ay mucaaradku saxiixeen.
Madaxweyne Saalax oo ka hadlayey heshiiska ayaa yiri “ Mucaaradku waxa ay qeyb ka yihiin xukuumadda KMG sida heshiisku dhigayo muddo sagaashan maalmood , mawaxaan kula macaamilnaa teleefoon, maxay halkaan u imaan la yihiin”.
Mar sii horeesay taageerayaasha madaxweyne Saalax ayaa ku weerarar ergada khalijiyiinta iyo wafdiga reer galbeedka safaaradda Imaaraatka carabta uu ku leeyahay magaalada Sanca , taasi oo ay u fasirteen siyaasiinta indha indhaysa siyaasadda dalka Yemen in xisbiga haya talada dalka Yemen uusan raali ka ahayn waan waanta uu golaha iskaashiga gacanka uu ku doonayo xalinta rabshadaha ka scoda Yemen.
Ururka Shirweynaha Islaamka oo carabaabay walwalka uu ka qabo rabshadaha ka socda dalka Syria
Riyadh:- Bayaan ka soo baxay xafiiska ururka shirweynaha Islaamka ayaa lagu sheegay sida ururku oga walwalsan yahay rabshadaha ka socda dalka Syria kaasi oo kadhashay dhimashada iyo dhaawaca dad rayid ah iyo qaar ka tirsan ciidanka Syria iyo muwaadiinta u qaxaya dolwadaha deriska iyagoo raadsanaya nabad gelyo iyo deganaansho.
Ururka ayaa ugu baaqay ciidanka amaanka dalka Syria in ay ka joogsadaan waxyeeleenta dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan islamarkaana ay ilaaliyaan maslaxadda dalka iyadoo loo marayo wadahadal iyo maamul wanaag sida ku cad xeerarka heshiiska ururuka shirweynaha Islaamka.
Dhanka kale madaxa ururka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha dalka Syria ninka lagu magcaabo C/kariim Riixaawi ayaa sheegay in maamulka Syria uu xabsiga ka sii daayey Anwar Al-bani oo ah nin u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ahna madaxa xarunta Syria daraasaatka iyo daba galka xeerarka.
Dhinaca kale xukuumadda Syria ayaa u magacowday C/della Dardari oo horey u ahaan madaxa golaha wasiirada in uu noqdo safiirka cusub ee Syria u fadhiya magaalo madaxda dalka Turkiga Ankara .
Talaabadani ayaa ku soo beegmaysa kadib markii uu soo xumaaday xiriirka Syria iyo Turkiga iyo hadaladii ka soo baxay ra’iisal wasaaraha turkiga rajab Dayib Ardugaan ee ku aadanaa qalalaasaha ka socda dalka Syria kuwaasi oo waxyeeleeyey xiriirka istaraatiijiga ah ee u dhexeeya labada dal.